Face of Beauty International 2018 - Myint Mo May
Face of Beauty International 2018 ပြိုင်ပွဲတွင် Winner ဆုရရှိထားသူ အလှမယ် မြင့်မိုရ်မေ သည် ဇူလိုင်လ ၂ ရက်နေ့မှ ၄ ရက်နေ့အထိ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတွင်ပြုလုပ်မည့် Face of Beauty International 2019 ပြိုင်ပွဲအကြိုစာနယ်ဇင်း မိတ်ဆက်ပွဲသို့တက်ရောက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အလှမယ်
Photos for Auto Mobile Partner - GAC Motor
Miss Universe Myanmar 2018 - Hnin Thway Yu Aung
Dress Designer - Minn Thet Sean (Sweet & Smart)
Place - Novotel Yangon Max
Miss Universe Myanmar 2019 - Swe Zin Htet (Hpa An)
Healthy Body ~ Beautiful Mind ~ Myanmar Heart
Introducing the newly crowned Miss Universe Myanmar 2019 Swe Zin Htet with her very first victory photos after crowning!
(၇)ကြိမ်မြောက်မယ်စကြာဝဠာမြန်မာပြိုင်ပွဲကြီး အား ကြွရောက်ချီးမြှင့်ပေးကြသော ဂုဏ်သရေရှိလူကြီးမင်းများ၊ ပံ့ပိုးကူညီပေးကြသူများနှင့် စာနယ်ဇင်းသတင်းမီဒီယာအသီးသီးမှ တာဝန်ရှိသူများအား အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။
Congratulations to all the winners for 7th Miss Universe Myanmar
MUM2019 Winner : Swe Zin Htet (Hpa-An )
1st Runner Up : Hmwe Thet (Myeik )
2nd Runner Up : Htet Thiri Zaw (Mandalay )
3rd Runner Up : Htun Palal Yadanar (MinBu )
4th Runner Up : Lin Htet Htet Kyaw (Myitkyina )
7th Miss Universe Myanmar Evening Gown Round
Makeup - Bsc Cosmetology & Artists (Thailand)
Hair Do - NK Aung Sha
Photo - Phyo Min Zaw (Studio D Invictus)
Location - Novotel Hotel Yangon
Image may contain: one or more people, night and indoor
7th Miss Universe Myanmar Swimsuit Round
Swimsuit - Bsc Streamline
Shoes - Bsc Shoes
7th Miss Universe Myanmar Opening Round
Dress - BKK Silk
Designer - Lazing Gam Htoi
Photo Shooting For One Smart Star Myanmar
Our Miss Universe Myanmar Contestants 2019 shoot photos for our voting & SMS partner One Smart Star Myanmar.
View More » Click Here
MUM 2019 Official Announcement
Ladies and Gentlemen, we have to announce official announcements for Miss Universe Myanmar 2019, the biggest beauty pegeant in Myanmar.
Our official host for 7th MISS UNIVERSE MYANMAR is Kyaw Htet Aung. See you in the Coronation Night.
MUM 2019 National Costume Competition judges and singers
Thank you judges and singers at the MUM 2019 National Costume Competition.
Place: Gandamar Grand Ballroom
Photo: Phyo Min Zaw(Studio D Invictus)
(၇)ကြိမ်မြောက် ကျင်းပမည့် မယ်စကြာင်္ဝဠာမြန်မာ အလှမယ်များ၏ အမျိုးသားဝတ်စုံပြိုင်ပွဲကြီးအား ယနေ့ည 25.5.2019 (၆:၀၀) အချိန်တွင် Gandamar Grand Ballroom တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး Miss Universe Myanmar Facebook Page နှင့် Myanmar Celebrity Online Media Face
Miss Universe Myanmar ပြိုင်ပွဲဝင်များအား အလှပဆုံးပြင်ဆင်ခြယ်ပေးတာကတော့ နိုင်ငံတစ်ကာအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သော bsc cosmetology မှနှစ်စဉ် ပံပိုးပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ပြိုင်ပွဲဝင်များရဲ့ Official Swimwear Sponsor အဖြစ် bsc streamline မှ ပံပိုးပေးထားခြင်းဖြစ်ပြီး
7th Miss Universe Myanmar ပြိုင်ပွဲကြီးတွင် Voting & SMS partner အဖြစ် One Smart Star Myanmar ၏ Star Phone Application မှ ပံ့ပိုးကူညီထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ Star Phone Application သည် အစ္စရေး နည်းပညာတစ်ခုဖြစ်သော Unified Communication platform ဖြစ်ပြီး မိမိတို
A Visit to Novotel Yangon Max
မယ်စင်္ကြာဝဠာမြန်မာပြိုင်ပွဲဝင်အလှမယ်များသည် 7th Miss Universe Myanmar ပြိုင်ပွဲကြီးခမ်းနား ကြီးကျယ်စွာကျင်းပနိုင်ရေးအတွက် Venue Partner အဖြစ်ဒုတိယအကြိမ် ပံ့ပိုးကူညီပေးထားသော Global အမှတ်တစ်ဆိပ်ဖြစ်သည့် Novotel Hotel & Resorts Yangon Max မှ တာဝန်ရှိသူများ